सुझाव: Google छवि खोजको साथ तपाईंको स्टक फोटो साइटमा उस्तै वैक्टर छविहरू कसरी फेला पार्ने | Martech Zone
शुक्रबार, डिसेम्बर 11, 2020 शुक्रबार, डिसेम्बर 11, 2020 Douglas Karr
संगठनहरू प्रायः प्रयोग गर्दछन् भेक्टर फाईलहरू स्टक फोटो साइटहरू मार्फत लाइसेन्स प्राप्त र उपलब्ध हुन्छन्। चुनौती आउँछ जब उनीहरू संगठनमा अन्य संपार्श्विक अपडेट गर्न चाहन्छन् स्टाइल र ब्रान्डि match मिलान गर्न जुन पछिल्लो रिलिज गरिएको आइकनोग्राफी वा प्रतीकहरूसँग सम्बन्धित छ।
कहिलेकाँही यो कारोबारको कारण पनि हुन सक्दछ ... कहिलेकाँही नयाँ डिजाइनर वा एजेन्सी स्रोतहरूले सामग्रीको साथसाथै संगठनको साथ डिजाइन प्रयास गर्दछ। यो हालै हाम्रो साथ भयो जब हामीले एउटा कम्पनीको लागि काम गरिरह्यौं र उनीहरूलाई सामग्री निर्माण गर्न सहयोग गर्यौं।
स्टक फोटो साइटमा उस्तै वैक्टरहरू फेला पार्न गुगल छवि खोजी प्रयोग गर्नुहोस्
ट्रिक म सबैको साथ साझेदारी गर्न चाहन्छु गुगल छवि खोज प्रयोग गर्नका लागि। गुगल छवि खोजीले छवि अपलोड गर्न सक्षम गर्दछ र वेब भरमा मिल्दो छविहरूको साथ प्रतिक्रिया दिन्छ। एउटा सर्टकट, यद्यपि यो हो कि तपाई वास्तवमै कुनै खास साइट खोज्न सक्नुहुन्छ ... जस्तै स्टक फोटो साइट।
म एक सम्बद्ध र लामो समय को ग्राहक भएको छु Depositphotos। उनीहरूसँग छविहरूको एक अविश्वसनीय चयन, भेक्टर फाईलहरू (EPS), र भिडियोहरू केहि असाधारण मूल्य निर्धारण र इजाजतपत्रको साथ उनीहरूको साइटमा छन्। यहाँ छ कि म Google छवि खोजको प्रयोग कसरी उनीहरूको साइटमा अतिरिक्त भेक्टरहरू फेला पार्न प्रयोग गर्दछ जुन समान शैलीसँग मिल्दछ।
माथिको उदाहरणका लागि, मैले गुगल वेक्टर खोजमा अपलोड गर्नका लागि मेरो भेक्टर छवि png वा jpg ढाँचामा निर्यात गर्नु पर्छ।
समान भेक्टरहरूको लागि कसरी स्टक फोटो साइट खोजी गर्ने
पहिलो चरण प्रयोग गर्नु हो गुगल छवि खोजी। यसको लागि लिंक गुगलको गृह पृष्ठको शीर्ष दायाँ कुनामा छ।
गुगल छवि खोजी प्रदान गर्दछ अपलोड प्रतिमा जहाँ तपाइँ नमूना छवि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ खोजी गर्न चाहानुहुन्छ।
गुगल छवि खोजी अपलोड आइकन प्रदान गर्दछ जहाँ तपाइँ नमूना छवि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ खोजी गर्न चाहानुहुन्छ। त्यहाँ एक छवि URL टाँस्न एक विकल्प पनि छ यदि तपाईंलाई थाहा छ कि छवि तपाईंको साइटमा कहाँ बस्दछ।
अब गुगल छवि खोज परिणाम पृष्ठ छवि प्रदान गर्दछ। यसले मेटाडाटा सर्तहरू पनि समावेश गर्न सक्छ जुन छवि फाईलमा इम्बेड गरिएको छ।
यहाँ छ जहाँ चाल छ ... तपाईं एक थप्न सक्नुहुन्छ प्यारामिटर खोज्नुहोस् निम्न सिन्ट्याक्स प्रयोग गरेर केवल एकल वेबसाइट भित्र खोजी गर्न:
वैकल्पिक रूपमा, तपाईले अन्य सर्तहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तर म सामान्यतया भेक्टरहरूको खोजी गर्दा गर्दिन ताकि मैले समान भेक्टरहरूको सम्पूर्ण पुस्तकालयहरू डाउनलोड गर्न र प्रयोग गर्न सक्दछु।
यो गुगल छवि खोज परिणाम पृष्ठ परिणामको चयनको साथ आउँदछ जुन मूल छविसँग मिल्दोजुल्दो छ। तपाई प्राय परिणामहरु भित्र मूल भेक्टर पाउन सक्नुहुन्छ!
अब म केवल ब्राउज गर्न सक्छु Depositphotos यी परिणामहरूबाट, छविहरू वा लाइब्रेरीहरू फेला पार्नुहोस् जुन समान छन्, र तिनीहरूलाई थप डिजाइनहरूको लागि प्रयोग गर्नुहोस् जुन हामी ग्राहकको लागि सिर्जना गर्दैछौं!
खुलासा: म यसको लागि मेरो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गरिरहेको छु Depositphotos यस लेखमा।
टैग: ब्रान्डिङडिपोजिट फोटोसईपीएसगुगल छवि खोजीगुगल खोजी प्यारामिटरIllustratorखोजी साइटसाइट खोजीस्टक फोटोस्टक भेक्टरभेक्टर फाईलहरू